मेरो साथी टि भी – Page2– mero sathi tv
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार ०८:०८ March 3, 2018
LeaveaComment on सलमानलाई मुख भरिको जवाफ दिए माग्नेले | यस्तो भन्दै पोखे माग्नेले रिस | अब वैशाखमा आउनेरे नेपाल
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले धम्की दिएपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै स्थगित भएको बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको नेपाल कन्सर्ट अब वर्ष २०७५ को बैशाख पहिलो साता हुने भएको छ । नेपालको आयोजक संस्था ओडिसी इन्टरटेन्मेन्टले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत यो कुराको औपचारिक जानकारी दिएको हो । ुदबगं द टूर नेपालु विशेष कारणले स्थगित भएको […]
१८ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १६:१३ March 2, 2018
LeaveaComment on सलमान खानले किन गरे नेपालको बेइजत ! बारम्बार किन यस्तो भन्छन नेपाललाई अब के होला ?
सलमान खन नेपाल आउने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । यो संगसंगै बिश्व बजारमा नेपाल बिश्वकै असुरक्षीत गन्तव्य रहेको भ्रम पैदा भएको छ । विप्लव माओवादीको चेतावनीका कारण स्थगित भएको उक्त शोका लागि सलमान र उनको टिमका सबैले पारिश्रमिक अग्रिम लिइसकेको बुझिएको छ । सलमानको टिमलाई बैंकमार्फत पाँच करोड रुपैयाँ पठाइसकिएकाले ढिलो चाँडो कार्यक्रम गर्नैपर्ने दवाव […]
१८ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १५:३१ March 2, 2018
LeaveaComment on श्रीदेवीलाई छोरीको यस्तो मनै रुवाउने पत्र
अक्सर बलिउड इभेन्टमा छोरी जान्ह्वीलाई डोहोर्‍याउँदै पुग्थिन्, श्रीदेवी । पार्टी होस् वा फिल्म पि्रमियर, जान्ह्वीलाई साथै लाने गर्थिन् । जान्ह्वीले पनि आमाकै पदचाप पच्छ्याउँदै बलिउडमा इन्टि्र गरिन् । करण जौहरको फिल्म ‘धडक’बाट उनी यसैबर्ष बलिउड डेब्यु गरेकी थिइन् । फिल्मको सुटिङ भइरहेको छ । तर, छोरीको फिल्म हेर्ने अवसरबाट सधैका लागि बञ्चित भइन्, श्रीदेवी । […]
१६ फाल्गुन २०७४, बुधबार १२:५० February 28, 2018
LeaveaComment on छबि र शिल्पा बिहे गर्दै अन्तरवार्तामै कुरा फुस्कीयो
पोखरा । छविराज ओझाद्वारा निर्मित फिल्म ‘मंगलम’ यतिबेला मोफसल प्रचार९प्रसारको क्रममा पोखरमा पुगेको छ । निर्माता छविराजसँगै निर्देशक नवल नेपाल, अभिनेत्री शिल्पा पोख्रेल, नायक पुष्प खड्कालगायतको टिम पोखरा पुगेको हो । पोखरमा टिमले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी फिल्मबारे जानकारी दियो । फिल्मका बारेमा बोल्ने क्रममा निर्माता ओझाले मंगलम आफ्नो २३औँ फिल्म भएको जानकारी गराउँदै यस […]
४ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १५:१५ February 16, 2018
LeaveaComment on नरोउ श्वेता ! भक्कानीएर आँशु थाम्न सकिनन् श्वेताले
‘कोहिनूर’पछि ‘कान्छी’ बनेर दर्शकमाझ आएकी नायिका तथा निर्मात्री श्वेता खड्कालाई दर्शकले साथ दिएका छन् । प्रदर्शनको पहिलो दिन, शुक्रबार आकाश अधिकारी निर्देशित ‘कान्छी’ले ८० प्रतिशत माथिको अकुपेन्सी कायम गरेको हलवालाले जानकारी दिएका छन् । फिल्मले शुक्रबार गरेको यो व्यापार निकै राम्रो हो । ‘खासमा यो नसोचेको अकुपेन्सी हो’, मल्टिप्लेक्सका एक हल म्यानेजरले भने, ‘आइतबारदेखि कान्छीको […]
४ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०९:४७ February 16, 2018
LeaveaComment on अनमोललाई फिल्मबाटै आउट गर्ने योजना (भिडियोसहित)
पोखरा । अनमोलको कृ को विषयमा पछिल्लो समय विभिन्न प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् । पहिले लागौ के हो कृ तर्फ युवापुस्ताले साक्षत्कार गरिरहने प्रेमिल कथा हो, कृ । अनमोलको फ्यानका लागि यो कथा आफ्नै जीवन९भोगाइसँग मिलेमा ‘त्यो संयोग मात्र हुनेछ ।’ किनभने यसका ‘घटना तथा पात्रहरु काल्पनिक’ छन् । ब्रिटिश गोर्खाबाट पहिलो छुट्टीमा आएका लाहुरे अनमोल […]
३ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १९:४४ February 15, 2018
LeaveaComment on आज यस वर्षकै पहिलो सूर्यग्रहण यी ७ राशिको चम्किनेछ भाग्य, ५ राशिलाई नोक्सान !
लगभग १५ दिनको अन्तरालमा यो वर्ष २०१८ मा दोस्रो ग्रहण देखिदैछ । १६ फेब्रुअरी अर्थात् फागुन ४ गते यस वर्षको पहिलो सूर्यग्रहण लाग्नेछ । यो भन्दा पहिले गत महिना जनवरी ३१ मा पहिलो चन्द्रग्रहण लागेको थियो । सूर्यग्रहण दक्षिण जर्जिया, प्रशान्त महासागर, चिली, ब्राजिल र अन्टार्टिका आदि देशहरुबाट देखिनेछ । यस सूर्य ग्रहणको कारण १६ […]
२ फाल्गुन २०७४, बुधबार १५:१७ February 14, 2018
LeaveaComment on कण्डम मात्र होइन ७२ घण्टे बिक्छ बढि ! माया होईन शरिर साटासाट गर्ने (भिडियोसहित)
पोखरा । प्रणय दिवसको औपचारिक सुरुआत सन् २६९मा रोमबाट सुरु भएको मानिन्छ। रोमका तत्कालीन सम्राट् क्लोडियस द्वितीयले आफ्ना सैनिकलाई प्रेम तथा विवाह गर्न रोक लगाएका थिए। सम्राट्को आदेशको उल्लङ्घन गर्दै त्यहाँका पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनले प्रेमका पक्षमा बोलेपछि धेरै सैनिकको उनले सार्वजनिक रुपमा विवाह गराएका थिए। आदेश तोडेको आरोपमा उनलाई इपू ७० को फेब्रुअरी १४ मा […]
अनमोल केसी लाई हलमै आएर प्रपोज ! यस्तो छ प्रेम पत्र (भिडियो)
१ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १३:४६ February 13, 2018
LeaveaComment on अनमोल केसी लाई हलमै आएर प्रपोज ! यस्तो छ प्रेम पत्र (भिडियो)
काठमाडौं । गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको अनमोल केसी अभिनित चलचित्र ‘कृ’ को चर्चा एकदमै राम्रो छ । उनी अभिनित हरेक चलचित्र व्यवसायिक रुपमा सफल हुने भएको हुनाले कृ को कमाइ कति भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वभाविक हो । फिल्मले पहिलो दुई दिन अर्थात (शुक्रबार र शनिबार) २ करोड भन्दा बढी कमाएको समाचार पनि मिडियामा […]
२९ माघ २०७४, सोमबार १५:५४ February 12, 2018
LeaveaComment on ‘कृ’ नायिका अदितीले नायिका पुजा शर्मालाई चिन्दिन भनेपछि !
काठमाण्डौं- शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कृ’ले देशैभरी उत्कृष्ठ ब्यापार गरिरहेको छ । पहिलो र दोश्रो दिन चलचित्रले एकदमै राम्रो ब्यापार गरेको छ भने तेश्रो दिन पनि हलमा दर्शकहरुको उत्तिकै भिड छ । अनमोल केसी स्टारर चलचित्र ‘कृ’मार्फत नायिका अदिती बुढाथोकीले पहिलो पटक चलचित्र क्षेत्रमा पाईला टेकेकी हुन् । <span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: […]